ခိုငျမိသားစုထဲကိုနောကျထပျရောကျရှိလာတဲ့ သားလေးကိုနာမညျပေး ကငျ ပှနျးတပျပွီး (၂)လပွညျ့မှေးနေ့ မင်ျဂ လာလေးပွုလုပျပေးခဲ့တဲ့ မမေေ ခိုငျနှငျးဝေ – XB Media Myanmar
ခိုငျမိသားစုထဲကိုနောကျထပျရောကျရှိလာတဲ့ သားလေးကိုနာမညျပေး ကငျ ပှနျးတပျပွီး (၂)လပွညျ့မှေးနေ့ မင်ျဂ လာလေးပွုလုပျပေးခဲ့တဲ့ မမေေ ခိုငျနှငျးဝေ
နိုငျငံကြျောအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေိုတော့ ပရိသတျကွီးသိပွီးသားဖွဈ မယျထငျပါတယျ။ သူမကတော့ သူမခဈြတဲ့အနုပညာအလုပျတှနေဲ့အတူ ပရဟိတအလုပျတှေ ကို ပါတှဲဖကျလုပျကိုငျနတောဖွဈပွီး မိဘမဲ့ကလေးတှကေိုမိခငျနဲ့မခွားကာကှယျစောငျ့ ရှော ကျ ပေးနတောဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အမှနျတကယျလိုအပျနတေဲ့နရောတှမှောလညျး တတျ နိုငျသလောကျထောကျပံ့လှူဒါနျးမှုတှကေိုပွုလုပျပေးလရှေိ့ပါတယျ။
မိဘမဲ့ကလေးတှကေို မိခငျပမာစောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ဒီနမှေ့ာလညျး ခိုငျမိသားစုထဲကိုနောကျထပျရောကျရှိလာတဲ့ သားလေးကိုနာမညျပေးကငျပှနျးတပျပွီး ၂ လပွညျ့မှေးနမေ့င်ျဂလာလေးပွုလုပျပေးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ အဆိုပါမှေးနပှေဲ့လေး မှာ တော့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့အဒျေါဖွဈသူ ဒျေါမွငျ့မွငျ့ခိုငျကလညျး ကလေးတှကေိုနလေ့ညျစာ ကွကျ ပေါငျးနဲ့ထမငျး,အစာပွစေားဖို့ Cake မုနျ့တှနေဲ့ ဝနျထမျးတှအေတှကျခေါကျဆှဲကွျောမြား လာရောကျလှူဒါနျးပေးခဲ့တယျလို့လညျး သိရပါသေးတယျ။
အဲဒီအကွောငျးလေးကိုတော့ ““ခိုငျဥက်ကာမငျးမွတျ”ကမြသားလေးကို နာမညျပေးကငျ ပှနျးတပျပွီး ဒီနေ့ ၂ လ ပွညျ့မှေးနမေ့င်ျဂလာလေးပွုလုပျတဲ့နလေ့ေးပါ. ကမြရဲ့ကွီးတျောကွီး ဒျေါမွငျ့မွငျ့ခိုငျနဲ့ ညီမတျောက ကလေးတှကေိုနလေ့ညျစာကွကျပေါငျးနဲ့ထမငျး,အစာပွစေားဖို့ Cake မုနျ့တှနေဲ့ ဝနျထမျးတှအေတှကျခေါကျဆှဲကွျောလာကြှေးပါတယျရှငျ
မှေးနေ့ Cake လေးခှဲပေးတာကို သားလေးမသိတတျသေးပမေဲ့ အထိမျးအမှတျ လေးတ ခုအဖွဈဆုတောငျး ပေးပွီး ဖယောငျးတိုငျလေးမှုတျပေးလိုကျတဲ့အခါ ရငျထဲမှာအနှေးဓါ တျလေးသိမျ့ခနဲလှိုကျ သှားပါတယျရှငျ “ဆိုပွီးခိုငျနှငျးဝကေ သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာ ရေးသားဖျောပွထားခဲ့ တာ ဖွဈပါတယျ။
Source:Khine Hnin Wai
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးသိပြီးသားဖြစ် မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့ သူမချစ်တဲ့အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူ ပရဟိတအလုပ်တွေ ကို ပါတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုမိခင်နဲ့မခြားကာကွယ်စောင့် ရှော က် ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်း တတ် နိုင် သလောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မိဘမဲ့ကလေးတွေကို မိခင်ပမာစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း ခိုင်မိသားစုထဲကိုနောက်ထပ်ရောက်ရှိလာတဲ့ သားလေးကိုနာမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်ပြီး ၂ လြ ပည့်ေ မွးနေ့မင်္ဂလာလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါမွေးနေ့ပွဲလေး မှာ တော့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ကလည်း ကလေးတွေကိုနေ့လည်စာ ကြက် ပေါင်းနဲ့ ထမင်း,အစာပြေစားဖို့ Cake မုန့်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ခေါက်ဆွဲကြော်များ လာရောက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါသေးတယ်။
အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ ““ခိုင်ဥက္ကာမင်းမြတ်”ကျမသားလေးကို နာမည်ပေးကင် ပွန်းတပ်ပြီး ဒီနေ့ ၂ လ ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာလေးပြုလုပ်တဲ့နေ့လေးပါ. ကျမရဲ့ကြီးတော်ကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်နဲ့ ညီမတော်က ကလေးတွေကိုနေ့လည်စာကြက်ပေါင်းနဲ့ထမင်း,အစာပြေစားဖို့ Cake မုန့်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ခေါက်ဆွဲကြော်လာကျွေးပါတယ်ရှင်
မွေးနေ့ Cake လေးခွဲပေးတာကို သားလေးမသိတတ်သေးပေမဲ့ အထိမ်းအမှတ် လေးတ ခုအြ ဖစ်ဆုတောင်း ပေးပြီး ဖယောင်းတိုင်လေးမှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ရင်ထဲမှာအနွေးဓါ တ်လေးသိမ့် ခနဲလှိုက် သွားပါတယ်ရှင် “ဆိုပြီးခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားေ ဖ်ာပြထားခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမီးတွေချောရင် အမေကိုမမှီဘူး ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တဲ့ နဝရတ် ရဲ့မေမေ
“ကျောင်းဖွင့်ရာသီရောက်ပြီမို့ လမ်းေ ပါ် ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးတွေအ တွ က် ကျောင်းပစ္စည်းတွေ ပေးဖို့ ပြင် ဆင်နေပြီဆိုတဲ့ Sinon Loresca